Software - Gadget Nhau | Gadget Nhau (Peji 2)
Kana iwe uchitsvaga akanakisa dzimwe nzira akasunungukawo kuMicrosoft Office, muchinyorwa chino tichakuratidza sarudzo dzakanakisa.
Iwo ma trackers anowanikwa pane angangoita ese mapeji ewebhu ane basa rekuziva kwedu kwatinofarira uye zvatinofarira. Kushandisa VPN ndiyo chete mhinduro yekuzvidzivirira.
Kusatsvaga faira pakombuta yedu kunogona kuita mutambo pakutanga kana tikasatevedzera nhanho dzatinokuratidza muchinyorwa chino kuti tikwanise kuchidzorera nekukurumidza.
Kana isu takave nerombo rakaipa rekurasa faira reExcel, mune ino chinyorwa tinokuratidza dzese sarudzo dziripo kuti ukwanise kuidzosera zvinobudirira.
Ungabvisa sei adware
Tsvaga kuti chii chinonzi adware uye kuti tingaibvise sei kubva pakombuta yedu kana nhare mbozha nguva dzese kudzivirira matambudziko.
MacOS Catalina yave kuwanikwa: chii chitsva uye maitiro ekuiisa
Kana iwe uchida kugadzirisa kune macOS Catalina nekukurumidza sezvazvinogona, iwe unofanirwa kuziva kuti kune nzira mbiri dzekuzviita: imwe nekukurumidza uye imwe inononoka
Yuka, iyo mobile application iyo inotibvumidza isu kuongorora chikafu uye zvipoda
Kutenda kune iyo Yuka application, tinogona kukurumidza kuongorora mhando yezvigadzirwa zvatinazvo kumba kana isu tinotarisira kutenga
Mailrelay: Chishandiso chekugadzira yako email email kushambadzira
Tsvaga zvimwe nezve Mailrelay, chishandiso chaunogadzira uye nekugadzirisa kushambadzira kweemail uye tsamba dzemishumo yekambani yako.
EaseUS Data Kudzoreredza Wizard Pro: Iyo yakanakisa chirongwa chekutora yakarasika data
Tsvaga zvimwe nezve EaseUS Dhata Yekudzosera Wizard Pro, chirongwa chakanakisa chekudzosera data kubva pakombuta yako. Ungaiwana sei?
Maitiro ekudzoreredza iyo Hotmail kiyi iyo yakabiwa
Microsoft inopa nzira yakananga yekudzosera iyo Hotmail password kana yakabiwa uye mushandisi haakwanise kupinda kuti achinje.
Kana iwe uchida kugadzira mbatya dzako kana kuda kuve neyako nguo dzakasarudzika, pane chirongwa chinoshanda ku ...
Pasina kushandisa mari, unogona kurima mapasipoti-saizi mapikicha zvichibva munyika uye zvinyorwa zve ...
Matipi ekuti uwane zvakanyanya kubva paSpotify pane yako smartphone
Tsvaga iyi nhevedzano yemanomano ayo kuti uwane zvakanyanya kubva kuSpotify application pane yako smartphone. Spotify manomano eApple.
Maitiro ekunyorera kune PDF
Kunyorera kuPDF iri nyore maitiro. Tsvaga akanakisa maapplication efoni uye komputa kugadzirisa uye kunyora zvinyorwa zvePDF.
Kupora Mahara: Iyo yakanakisa software kudzoreredza yakadzimwa data
Tsvaga zvimwe nezveRecoverit, chirongwa chakanakisa pamusika kudzoreredza data rakadzimwa kubva pakombuta yako nenzira yakapfava uye yemahara.
dr.fone: Chishandiso kuchinjisa uye kudzorera WhatsApp pane iOS uye Android
Tsvaga zvimwe nezve dr.fone, chishandiso chinokutendera iwe kuendesa, kudzoreredza kana kuteedzera WhatsApp nhaurwa pakati peiyo Android neIOS foni.
Maitiro ekugadzira gwaro rePDF
Kana iwe uchida kugadzira gwaro rePDF, iwe unongofanirwa kuteedzera ese matanho atinokuratidza iwe mune ino dzidziso.
Maitiro ekumanikidza iyo PDF
Tsvaga nzira dzese dziripo dzekumanikidza PDF pakombuta yako, kubva pamapeji ewebhu kuenda kuAdobe Acrobat Pro kuti utarise paMac.
Chinyorwa cheEmule 2022 maseva akagadziridzwa aine masevhisi akazara zvizere. Tsvaga maitiro ekuchengetedza yako eMule kuvandudzwa otomatiki kana nemawoko.
Maitiro ekusunungura nzvimbo muCloud
Kana iwe uchida kuwana yemahara nzvimbo mune yako iCloud account pasina kumanikidzwa kuhaya imwe nzvimbo, heano mamwe matipi ekuti uzviite.
Kana iwe uri kutsvaga kunyorera kuti uvhure mafaera ako muRAR fomati pane yako PC, Mac, iPhone kana Android, ipapo isu tinokuratidza kuti ndedzipi dziri dzakanakisa.
VLC ndomumwe wevatambi vakanakisa vatinayo nhasi kune chero chikuva, kubvira ...
Kana iwe uchida kuziva kuti ungaita sei backup makopi efoni yako, komputa kana piritsi, mune ino chinyorwa tinokupa iwe dzese dziripo nzira.
Maitiro ekuenda kubva kuPDF kuenda kuJPG
Kuenda kubva paPDF kuenda kuJPG inzira yakapusa isingade ruzivo rwakakura rwechinhu. Muchikamu chino tinokuratidza maitiro ekuzviita.
Maitiro ekurodha pasi mavhidhiyo eYouTube pasina zvirongwa
Kuti utore chero vhidhiyo kubva kuYouTube hazvidi kuti ushandise chero chechitatu-bato kunyorera, nekuti tinogona kuzviita kubva kubhurawuza redu
Chii chinonzi Google Drive
Kana iwe uchiri kusaziva kuti chii chinonzi Google Drive, muchinyorwa chino tinokuratidza zvazviri, ndezvei uye nezvose zvaunogona kuita nazvo.
Huawei inozivisa EMUI 9.0, iyo hombe kuvandudza kune yayo Android-based inoshanda sisitimu
Kambani yeChinese inoramba iri pakati pezvinhu zvinotungamira pasi rose uye mazuva mashoma apfuura yakaburitsa Apple kubva kune yechipiri ...
Maitiro ekugadzirisa Outlook Inbox folda
Tsvaga maitiro ekugadzirisa yako Outlook Inbox kana iwe ukaivhura nekanganiso ine chekuita nePST mafaera mune yekuchengetedza data.
Yekare Firefox yekuwedzeredza yatove neinopera zuva
Kuvhurwa kweFirefox Quantum, iyo ichangoburwa kugadziriswa kweMozilla Foundation browser, yakarova musika gore rapfuura, neMozilla Foundation, iyo ine browser yeFirefox, ichangobva kuburitsa chirevo ichizivisa zuva rekupera kwezvakawedzerwa zvekare.
Maitiro ekuisa uye kugadzirisa madingindira muGoogle Chrome
Kana zvasvika pakushandisa mabhurawuza edu, Google Chrome ndiyo yega browser inotibvumidza kuti tidaro, zvirinani nemamwe mavara pane Kuisa nekutarisira misoro muGoogle Chrome kugadzirisa browser redu inzira yakapusa yatinonyora pazasi.
Iyo Bose QC35II yatove nerutsigiro rwe Alexa
Iyo Bose QC35II yatove nerutsigiro rwe Alexa. Tsvaga zvimwe nezve aya mahedhifoni anogona ikozvino kushandisa Amazon mubatsiri
Yako Runhare, iko kunyorera kuwana kwedu Microsoft iOS kana Android terminal kuda kusvika pamusika
Mumusangano wekupedzisira wevagadziri veMicrosoft, kambani yakazivisa, mukuwedzera kune zvitsva zvitsva zvakanangwa paboka iri, ...
Ivo vanogadzira software inokwanisa kuziva zvauri kufunga nezvazvo
Boka revaongorori kubva kuKamitani Lab yeYunivhesiti yeKyoto rakakwanisa kugadzira software inokwanisa kuziva zvauri kufunga nezvazvo.
Cloud Music Player: Ridza mimhanzi yemahara pane yako iPhone kubva mugore
Cloud Music Player: Teerera kune yemahara mimhanzi kubva kune gore pane iPhone. Tsvaga zvimwe nezve uyu mutambi wemimhanzi kune yako iPhone kana iPad.
Nzira yakasviba yave kuwanikwa muAptlook. Tinokuratidza maitiro ekuishandisa
Zvichienderana nemashandisiro aunoita komputa yako, kungave masikati kana husiku, pamwe nemamiriro ekuvhenekera akatenderedza, zvinokwanisika kuti sevhisi yemicrosoft yeMicrosoft, Outlook, ichangobva kugamuchira chinhu chitsva chinozofarirwa nevashandisi vazhinji. Tinokuratidza maitiro ekuishandisa.
AI itsva yeGoogle ichabatsira kugadzirisa kukanganisa kwegirama
Iyi itsva vhezheni yeGoogle AI iyo ichaburitswa yeGoogle Docs, inobvumidza vashandisi kugadzirisa iyo ...
Firefox inonyaradza ruzha rwemavhidhiyo anotamba otomatiki
Chokwadi pane kanopfuura kamwe chiitiko, wakave nekutya kwakanaka paunoona kuti ruzha rwusinganzwisisike rwatanga sei kubuda mumatauri ako, pasina Iyo inotevera yekuvandudza yeMozilla Foundation Firefox browser haizo ridza mavhidhiyo emawebhusaiti atinoshanyira. iyo inzwi rakashandurwa.
Ungachinja sei mitsara nemakoramu muMicrosoft Excel
Paunenge uchigadzira chero mhando yegirafu (zvichibva pane inoshanduka dhata), zvingangoitika manhamba, kuongororwa, kutsvaga pakati pemashizha akasiyana, tsvaga Kana iwe wakagara uchinetseka kana iwe uchikwanisa kuchinja mitsara yemakoramu mune pepanhau, mhinduro ndiungu uye tinokuratidza maitiro zviite.
Ungachinja sei nzvimbo yefaira rekuodha muGoogle Chrome
Google Chrome rave mumakore achangopfuura iro rinonyanya kushandiswa mubhurawuza pasirese, papuratifomu yeApple (yakaiswa nenzira) Kuchinja nzvimbo yeodhaunirodha folda mukopi yedu yeGoogle Chrome maitiro ari nyore kwazvo isu isu mune izvi chinyorwa.
Hunyanzvi hwekugadzira hunouya mukugadzirwa kwemishonga mitsva
Boka revanyanzvi veMIT rakakwanisa kugadzira epuratifomu yekuchenjera inokwanisa kugadzira mishonga mitsva.
RAMpage, chirwere chakakomba chinokanganisa zvese Android zvinogadzirwa mushure megore ra2012
Boka revaongorori rakafumura izvo zvinozivikanwa seRAMPage, chishandiso chinokwanisa kushandisa kusagadzikana kunokanganisa zvishandiso zveAndorid.
Instagram Lite yakavhurwa zviri pamutemo munyika dzinoverengeka
Tiri pakati pezhizha uye kushandiswa kwedata kwemidziyo yedu kunowedzera kana kutombooma zvichienderana ne ...
Nvidia ave kugona kutamba chero vhidhiyo mu 'Slow Motion'
Nvidia inoratidza pachena kuruzhinji huchenjeri hwayo hwekugadzira hunogona kutamba chero mhando yevhidhiyo muSlow Motion.
Android emulator Andy anogona kunge achiisa cryptocurrency yekuchera software
Android emulator Andy iri kuisa cryptocurrency software pamakomputa ese kwairi kuiswa, kunyangwe mushambadzi achiramba
Iyo Nintendo switchch inobvumidza iwe kunakidzwa neNetflix uye YouTube munguva pfupi
Zvinoenderana nekubuda kwazvino, zvese zviri zviviri Netflix neYouTube zvinogona kunge zviri kuuya kuNintendo Shandura munguva pfupi.
Chrome haibvumidze kuiswa kwewedzero kubva kunze kweiyo Chrome Web Chitoro
Kuwedzeredzwa ndeimwe yeakanakisa zvigadzirwa zvakagamuchirwa nemabhurawuza mumakore achangopfuura, kunyangwe ivo vakomana ...
Apple inogadzirisa makore gumi nerimwe ekuchengetedza macOS
Apple ichangobva kuzivisa kuti ivo vapedza kugadzirisa chinetso chakakomba chekuchengetedza icho chave chiripo muMacOS kweanopfuura makore gumi nerimwe.
Aya ndiwo maitiro etsika ayo Google achazoshandisa kugadzira ayo ekuchenjera masystem
Google ichangobva kuzivisa kuiswa kweseteni nyowani yetsika dzavanoteedzera pavanogadzira huchenjeri hwekunyepedzera.
Yese nhau mune macOS Mojave
Pano isu tinokuratidza iwe dzese nhau dzinouya kubva muruoko rweinotevera vhezheni yeMacOS, yakabhabhatidzwa seMojave.
Chiitiko chakawanikwa mune iyo Steam desktop application yanga iriko kwemakore gumi apfuura
Kutenda nerubatsiro rwenyanzvi yekuchengetedzwa kwemakomputa Tom Court, njodzi yakakomba irimo muSteam komputa mutengi yakagadziriswa, iyo yakazogadziriswa mwedzi mishoma yapfuura naValve.
Microsoft inoti izvozvo Windows 10 haidi chero antivirus
Mushure mekuona kuti bvunzo dzeAVTEST dzinosimbisa sei kuti Windows Defender ndiyo yakanyanya kunaka antivirus mhinduro pamusika, kambani inozviratidza pane yayo blog.
Uri kutsvaga basa here? Google inotangisa basa rayo rekutsvaga muSpain
Ichokwadi kuti mazuva ano zviri nyore kuwana basa nekuda kwekugadzirisa hupfumi hwenyika, asi mu ...
Dzakanakisa dzimwe nzira dzeku Instapaper, izvozvi zvave kumira kushanda muEurope
Paunenge iwe wavhara sevhisi yekuchengetedza mawebhusaiti kuti uverenge mushure meInstapaper, mune ino chinyorwa tinokuratidza nhevedzano yezvinopfuura zvinoshanda dzimwe nzira.
Starbucks inopfuura Apple Pay, Google Pay uye Samsung Pay mukubhadhara nhare
Starbucks nhare dzekubhadhara nharembozha inozivikanwa muAmerica. Tsvaga zvimwe nezve budiriro yeiyo kofi cheni app muAmerica.
Google Duo inounza kugovana skrini kuApple
Google Duo inoshandisa kugovana skrini paAroid. Tsvaga zvimwe pamusoro pechinhu chitsva chiri kuuya kune zvishandiso zveApple muvhidhiyo yekufona app.
Maitiro ekuisa madhezheni muGoogle Chrome
Iwo ekuwedzeredzwa aine akakwana mukwanisi kune chero browser. Kana usati wafunga kuyedza izvo zvinowedzerwa mubrowser inozivikanwa kwazvo pamusika, pazasi tichakuratidza maitiro ekuisa maapplication muGoogle Chrome.
PGP kunyorera kune njodzi, email haisisiri nzira yakachengeteka yekutaurirana
Boka revatsvakurudzi rakakwanisa kuona kushomeka kukuru mukati meiyo anonyanya kushandiswa maemail encryption algorithms kutenderera pasirese.
Kutsvaga dzimwe nzira kune PowerPoint? Idzi ndidzo sarudzo dzakanakisa dzekuita hurukuro online kana yemahara pakombuta yako.
Sangano muIndia rakakwanisa kugadzira chinzvimbo chekuziva kumeso chinokwanisa kutsvaga vana vasipo. Munguva yekuyedzwa kwekuchaira ndege, vangangoita zviuru zvitatu zvevana zvakawanikwa mumazuva asingasviki mana.
Chrome inononoka, maitiro ekuitangazve
Kana Google Chrome browser yatanga kuratidza zviratidzo zvekuneta, inogona kunge iri nguva yekuchenesa. Pazasi isu tinokupa iwe diki dzidziso uko isu tinokuratidza zvaunofanira kuita kana Chrome ichinonoka.
Firefox ichatanga kuratidza kushambadza mune inotevera vhezheni kana isu tavhura iyo nyowani tebhu
Mozilla Foundation ichangobva kuzivisa kuti inotevera vhezheni yeFirefox browser ichatanga kuratidza kushambadza pese patinovhura tabo nyowani.
Kukanganisa kwekuchengetedzwa kweTwitter kunotipa zano rakasimba kuti tichinje password
Zvinotaridza kuti hapana munhu akachengeteka kubva kumatambudziko ane chekuita nekuchengetedzeka kwepassword uye mune ino kesi ...
Opera Kubata, mobile web browser kuti iwe unogona kushanda neruoko rumwe
Opera Kubata ndiyo nyowani nyowani nyowani browser inokutendera iwe kubata zvese neruoko rumwe. Panguva ino inongowanikwa chete kune Android
Maitiro Ekutsvaga Ese Akavhura Chrome Tabhu
Kana isu tichida kutsvaga mazwi pakati pematebhu ese akavhurwa mune yedu Chrome browser, tinofanirwa kushandisa chiwedzero chinonzi Search Plus.
Kutenda kuNVIDIA hauchade kuve PhotoShop nyanzvi yekugadzirisa mufananidzo sepro
NVIDIA inotitaridza mhedzisiro yekutanga ye software yayo inokwanisa kugadzirisa mifananidzo zvinyatsoitika, chimwe chinhu chinoita kuti iwe usade kuziva maitiro ekubata PhotoShop kunge nyanzvi.
WhatsApp inotibvumidza kurodha kopi yedata redu
WhatsApp inogadzirisa matanho matsva anozotanga kushanda musi waMay 25 muEurope yese. Uye zve izvi zvinotendera mushandisi kurodha pasi yakazara kopi yedhata ravo rese
Iyo Nintendo switchch yakazopedzisira yabvarurwa uye hapana anogona kuzvigadzirisa
Zvikwata zviviri zvakakumikidzwa mukuvandudzwa kwezviitwa zvakadai seFailOverflow uye ReSwitched zvakakwanisa kubiridzira iyo Nintendo Shanduko ichitora mukana wedambudziko mune yakasungwa yeNvidia Tegra X1, kutadza kusingagadziriswe naNintendo chaiko.
Chat: nzira itsva yeGoogle kune WhatsApp
Chat: Yekushandisa meseji yeGoogle. Tsvaga zvimwe nezve iyo nyowani mameseji application iyo iyo kambani iri kuzotanga pamusika munguva pfupi iri kutevera.
Microsoft inoburitsa Windows Defender yekuwedzera yeChannel
Vakomana vanobva kuRedmond vatangisa kuwedzera kutsva kweiyo Chrome browser umo inobvumira vashandisi veiyi browser kuti vanakirwe neWindows Defender
Iwo akanakisa password mamaneja
Kutsvaga akanakisa password maneja? Pinda uye uwane mashanu akanakisa ekuchengetedza mapassword ako akachengeteka uye akawiriraniswa pakati pemidziyo.
Google iri kuyedza nzira ipfupi muChannel kunyora Emojis
Google iri kushanda kuti iwe ugone kunyora emojis kana mamonikisi muGoogle Chrome nenzira iri nyore. Iwe unogona parizvino kuyedza kuburikidza neGoogle Chrome Canary
WhatsApp beta inokutendera kuti utarise YouTube mavhidhiyo pasina kusiya iyo app
Ichi chinhu icho vashandisi veiyi meseji application vanga vachikumbira kwenguva yakareba, ikozvino mu ...
Waunofambidzana naye ari 'kunyora' asi iwo meseji haigume yasvika.Chinoitika chii chaizvo?
Kupinda kwatinozoongorora zvinoitika nechiratidzo che 'typing' chinowanikwa mune akasiyana mameseji ekunyorera kana munhu waanyorera achinyora meseji.
Instragram icharatidza chikafu chedu zvakare zvichiteerana
Kwenguva yegumi neshanu, kubva Facebook yatenga Instagram, iyo pikicha yemagariro inoshandura iyo algorithm yekudya zvakare, ichitibvumidza kuratidza zvirimo zvichiteerana.
Iyo inotevera vhezheni yeWindows 10 inongovhura maMail link kuburikidza neMicrosoft Edge
Rimwe remabasa matsva ari kuongororwa neMicrosoft neshanduro dzeramangwana reWindows 10, tinoiwana iri musungo wekuvhura maLink link chete muMicrosoft Edge
Unsubscriber, iyo iri nyore nzira yekubvisa spam
Iwe unoda here kubvisa izvo zvinotsamwisa kunyorera mune yako email? Unsubscriber ibasa remahara iro richakubatsira kubva pakutanga
Microsoft inobvumidza zvakare kuvhura Windows 10 mahara
Kana iwe uchida kumisikidza yako kopi ye Windows 10 mahara zvachose, mukati memazuva ano une mukana wekuzviita zvakare pasina kushandisa imwechete euro.
Rwiyo rwekugadzira: Chishandiso chitsva cheGoogle kugadzira yako mimhanzi
Rwiyo rwekugadzira: Chishandiso chitsva cheGoogle kugadzira yako mimhanzi. Tsvaga zvimwe nezve chishandiso ichi chinokutendera iwe kuti ugadzire mimhanzi.
WhatsApp inobvumidza iwe kudzima mameseji akatumirwa anopfuura awa rapfuura
WhatsApp yeApple ichagamuchira nyowani nyowani matinowana iko kwakanyanya kukosha kuvandudza maererano nenguva yekudzima meseji.
Movavi: Mhedzisiro yakazara uye vhidhiyo edhita yeWindows uye Mac
Movavi: Mifananidzo yakakwana uye vhidhiyo edhitaini yeWindows neMac.Tsvaga zvimwe pamusoro pevagadziri izvi zvinoita kuti mapikicha ekugadzirisa kana mavhidhiyo zvive nyore uye zvinotipa sarudzo dzakawanda.
Iyo yakakurumbira Swype keyboard yemafoni emafoni haichazovandudzwa
Iyo yakakurumbira Swype keyboard haichazogashira inogadziridza uye vagadziri vaibvisa kubva kuApple neGoogle mashopu ekushandisa.
Chuletator uye dzimwe nzira dzekugadzira zvimedu
Munhu haararame naChuletator chete. Muchinyorwa chino tinokuratidza dzimwe nzira dzakanakisa dzatinogona kuwana paInternet kugadzira zvimedu zvinotibatsira kupasa bvunzo tisina kudzidza.
MaGoogle enzira dzekuchenjera dzeGoogle atove kukwanisa kunyora Wikipedia zvinyorwa zvoga
Google mainjiniya vakwanisa kushongedza yavo yekuchenjera masystem ane hunyanzvi hunokwana kuitira kuti software iyi ive kugona kunyora zvinyorwa zveWikipedia zvachose zvakasununguka.
Microsoft inonatsa Chitoro cheMicrosoft, ichibvisa maapplication ese anoshandisa iro zita reWindows
Microsoft yatanga kudzima maapplication ese ayo anoratidza izwi rekuti Windows muzita ravo kana tsananguro, kudzivirira kuti vasatsausa.
Pixabay inotangisa zvishandiso zviviri zvePhotohop neMicrosoft Office
Pixabay yakaburitsa maturusi maviri anozobatana mushe pamwe neAdobe Photoshop neMicrosoft Office kuti ipe yakajeka basa rebasa
Microsoft Photos Companion, iri nyore nzira yekuendesa mapikicha kubva kunhare yako kuenda kuPC yako
Microsoft yatangisa chishandiso chitsva cheApple neIOS kuita kuendesa mafoto kubva pashare kana piritsi kuenda Windows 10 nekukurumidza uye nekukurumidza.
Maitiro ekudzoreredza bhatani «Wona mufananidzo» muGoogle Chrome uye Firefox
Kutenda kuGoogle Chrome yekuwedzeredzwa, maawa makumi maviri nemana mushure mekubvisa iyo View Image chimiro kubva mukutsvaga kwemifananidzo, tinogona kupora zviri nyore.
Google inotsanangura mashandiro matsva ekushambadzira kweChannel
Kupinda kwatichataura nezvekuti, sekutsanangurwa kwazvakaitwa neGoogle pachayo, iyo yekudzivirira blocker iyo yavakabatanidza muiyo Chrome browser inoshanda
Fedora ine mhinduro yekuwedzera yako laptop yebhatiri kuita ne30%
Boka revagadziri veFedora rakakwanisa kuita kuvandudzwa kwakawanda kwavanoti iwe unogona kuwedzera hupenyu hunoshanda hwebhatiri rako repabhatiri kusvika pamakumi matatu muzana.
Kutanga muna Chikunguru, iyo Chrome browser inozotizivisa patinoshanyira webhusaiti isina kuchengetedzeka
Kutanga muna Chikumi, Google browser, Chrome, ichatanga kuzivisa vashandisi pavanoshanyira webhusaiti isina kuchengetedzeka, ndiko kuti, HTTP, saka haina kunyorera data painotumirwa pamusoro peInternet.
Maitiro ekutamba mkv mafaera
Iyo mkv mafaera ndiwo akanakisa sarudzo yekumisikidza akasiyana odhiyo, vhidhiyo uye Subtitle mafomati mune imwechete faira, asi zvinosuwisa havazi ese mashandiro masisitimu anopa native rutsigiro. Muchikamu chino tinokuratidza maitiro ekutamba mafaera emvv uye izvo zvaunoda kuti pasave nemufirimu angakudzivise.
Opera 51, iyo nyowani Opera browser inokurumidza kupfuura Firefox Quantum
Opera yaburitsa vhezheni itsva yeakakurumbira browser: Opera 51. Iyi vhezheni inosanganisira yakawanda yekuvandudza uye masosi seanokurumidza webhu browser nhasi.
Microsoft inouraya Windows 10 S 8 mwedzi mushure mekuburitswa kwayo
Iyo Redmond hofori gore rapfuura yakatanga bheji yakakwevera kutarisisa uye neiyo ...
ChromeOS 64 inouya nekuvandudzwa kwakamirirwa kwenguva refu
Google inotangisa patsva patsva kune desktop desktop operating system. Iyo ChromeOS 64, iyo inopa kwakawanda kuvandudzwa
Maitiro ekugadzirisa yakaoma Windows 10 kukanganisa
Rimwe rematambudziko iro vashandisi vazhinji vanotambura zuva nezuva rine hukama nezvikanganiso zvakakomba muWindows 10, zvikanganiso zvakakura zvine mhinduro yakapusa sezvatinokuratidza mune ino chinyorwa. Iwe une yakakosha kukanganisa mune yekutanga menyu uye cortana? Pinda uye isu tichakuudza maitiro ekuzvigadzirisa.
Kana iwo meseji "iyo com.google.process.gapps maitiro amira" ichiramba ichienderera pane chako kifaa, heano matanho aunoteedzera kuigadzirisa.
Mumaawa mashoma Xiaomi anogadzirisa dambudziko rekugadziriswa kweMi A1
Ichokwadi ndechekuti zvinokosheswa kuti kambani yeChinese yakaisa mabhatiri nenyaya iyi uye mu ...
Google inoedza Fuchsia OS paPixelbook
Google inoenderera ichishanda pane yayo inotevera inoshanda system inozivikanwa seFuchsia OS. Uye yakaburitsa zvinyorwa kuti zvikwanise kuiswa muPixelbook
Opera 50 ichabatanidza dziviriro yemuno neye cryptocurrency kuchera
Kudzivirira shamwari dzevamwe vanhu kubva kutora mukana wevamwe vashandisi, Opera ichaita natively kuvhura iyo cryptocurrency kukiya mune yayo inotevera vhezheni
Microsoft inobvisa Google Chrome browser kubva kuMicrosoft Store kuti isasangane nemitemo
Chishina cheChannel chinowanikwa muMicrosoft Store chakarambidzwa kubva kuMicrosoft Store, kutyora mirau yechitoro
Chrome 64 inokutendera iwe mbeveve mavhidhiyo anotamba otomatiki
Iyo nyowani Chrome 64 vhezheni ichave nesarudzo inodikanwa zvakanyanya nevashandisi: kukwanisa kunyaradza mavhidhiyo anotambwa otomatiki
Google Mepu haizoregi iwe uchisvetuka chako chinotevera chevoruzhinji kumira
Google Mepu yeApple inowedzera chinonakidza chiitiko chitsva kune avo vanoshandisa zvifambiso zveruzhinji zuva nezuva. Panguva ino chete yeApple
Chrome inotibvumira kunyararidza otomatiki kutamba kwemavhidhiyo
Iyo inotevera yekuvandudza yeChannel ichatibvumidza isu kuti tiregedze otomatiki kubereka kwevhidhiyo, muwebhu iyo yatiri kuda.
Iyo Xiaomi Mi A1 ishoma asi ivo vatotanga kugamuchira Android 8.0 Oreo
Zvinotaridza kunge zvisinganzwisisike kuti mudziyo unonetsa kuwana watogadzirira kana kuti uri kutogamuchira iyo yekuvandudza kwe ...
Apple inogona kuzivisa kutengwa kweShazam nhasi
Sekureva kwenhamba zhinji dzerunyerekupe, kutenga kwaApple mimhanzi yekuziva basa Shazam inogona kuziviswa nhasi
Artificial intelligence inouyawo kuPhotohop kuti ibvise mamiriro kubva kumifananidzo
Kutenda kuhungwaru hwekunyepedzera, inotevera vhezheni ye Photoshop ichatibvumira kupfura kumashure kwechinhu chikuru nenzira yakapusa.
Pixelmator Pro, imwe nzira ye Photoshop yevashandisi veMac, inosvika pamusika
Iyo yehunyanzvi vhezheni yePixelmator Pro inova inopfuura inoshanda nzira kune vese avo vashandisi vePhotohop.
Android 8.1 Oreo yatove yepamutemo, tinokuratidza dzese nhau
Isu tatova neyakanyanya yekutanga yekuvandudza yeiyo Android 8 Oreo inoshanda sisitimu, mune ino ndiyo vhezheni ...
Kunetsekana mu macOS High Sierra kunopa maneja mukana kune iyo Mac.Tinokuratidza mhinduro yenguva pfupi
Yekupedzisira njodzi huru iyo inokanganisa mashandiro ehurongwa yakawanikwa mu macOS High Sierra uye inokanganisa Apple Macs.
Tsvaga yakanakisa sarudzo yekuisa Android pane yako PC. Tinokuratidza kuti ndeipi sarudzo dzakanakisisa uye maemulators kuti unakirwe neApple pakombuta yako
YouTube inokutendera iwe kuti utenge matikiti kumakonzati
YouTube yakasaina kubatana neiyo Ticketmaster chikuva. Kubva ikozvino zvichienda zvichakwanisika kutenga matiketi emakonzati kubva kune yekufambisa sevhisi
Firefox Quantum inouya kukuita kuti usiye mamwe mabhurawuza ako
Firefox Quantum ndiyo yakasimba kwazvo vhezheni yeMozilla's browser. Inokurumidza, inoshandisa RAM shoma pane Chrome, uye ine UI nyowani
Online mapikicha edhita
Kana isu tichida kugadzirisa edu mafoto, tinogona kuwana akawanda masevhisi paInternet. Isu tinokuratidza iwe kuti ndeapi akanakisa epamhepo edhita edhita.
Acumos, nekuti Open Sosi yekunyepedzera njere inogoneka
Kupinda kwatichataura nezveAcumos, nyowani Yakavhurika Sosi yekuchenjera yekuchenjera sisitimu yakagadzirwa neLinux Foundation.
Mumwe mushandi weMicrosoft akaisa Chrome pakati pechiratidziro nekuti Edge anga amira kushanda
Zvinotaridza sekunge Microsoft ine hurongwa B hwekuti kana Microsoft Edge yamira kushanda muhurukuro: isa Google Chrome
Usati wagovana mavhidhiyo, ungangoda kuabvisa kuti aite madiki. Tinokuratidza masevhisi akanakisa ekucheka mavhidhiyo online
Iyo yakanakisa yemahara antivirus
Kana iwe uchitsvaga mahara antivirus, mune ino chinyorwa ini ndinokuratidza izvo izvo parizvino zviri zvemahara antivirus pamusika.
1Password yekuwedzera yeMicrosoft Edge ikozvino yavapo
Rimwe gore mushure mekuziviswa kwayo, iro 1Password rekuwedzera reMicrosoft Edge rave kuwanikwa kurodha pasi.
Iwe unoda here kuita mari yekuchera Bitcoins? Iye zvino zvave nyore nekutenda kumigodhi ye cryptocurrency muMakore. Tsvaga maitiro ekuchera yangu Bitcoin zvinobatsira.
Office 2019 iri kuuya gore rinouya kutsiva Hofisi 2016
Microsoft yazivisa kuvhurwa kweHofisi 2019, iyo vhezheni nyowani yeyakajairika Hofisi yepakati pegore rinouya
macOS High Sierra yave kuwanikwa kurodha pasi
Iyo yazvino vhezheni yemacOS yave kuwanikwa kurodha mahara kuburikidza neMac App Store
Maitiro ekugonesa kugovana marongero mukati Windows 10 iyo yakavanzwa nekutadza
Nhasi tinokudzidzisa maitiro ekugonesa ekugovana marongero mukati Windows 10, iyo yakavanzwa nekusarudzika uye kubva kwatinowana zvakanyanya kubva mairi.
BlueBorne, kutambura kunokanganisa zvinopfuura mamirioni zviuru zvishanu zvepasirese
Kupinda kwatichataura nezveBlueBorne, kunetsekana kwakanyanya kwechero hurongwa hweBluetooth hunobata anodarika zviuru zvishanu zvemamirioni.
Google Chrome inomira kutamba zvemukati zvine mutsindo otomatiki
Google Chrome ichatibvumidza isu nekukurumidza kuti tibvise iyo otomatiki kuburitswa kwemukati nezwi rinosvota isu tese nhasi.
Kurwiswa kweEQUIFAX kunoguma nekubiwa kweruzivo rwakakosheswa kubva kuvashandisi mamirioni gumi nemana
Boka revabiridzi rakakwanisa kuba risiri pasi pemamirioni gumi nemana emamiriyoni data kubva kuEQUIFAX chikwereti institution, inotsigirwa neASNEFF.
Gadzira mapikicha akakuvara
Tsvaga 4 maapplication ekugadzirisa akakuvadzwa mafoto kuitira kuti urege kurasikirwa nemifananidzo yakakosha yenguva dzakakosha. Kudzoreredza mifananidzo yakakuvadzwa kunogoneka.
Tsvaga maitiro ekuona mafaera achangoburwa muWindows 10. Kana warasikirwa neruzivo rwemagwaro ako achangoburwa mukati Windows 10, verenga iyi nhanho-nhanho dzidziso.
Isu tinowana iwo akanakisa ekupa majenareta kuti iwe ugone kugadzira yepamhepo yekupa mazita kana chero chaunoda. Pinda uye ronga raffle yako!
Pisa ISO kuDVD
5 mafomu ekupisa ISO kuDVD kana zvimwe midhiya senge CD-ROM kana Bluray. Kana iwe uchifanira kupisa mufananidzo we ISO kuDVD, tinokuratidza maitiro ekuzviita.
Dropbox's Pepa rinowedzera basa rekushandira pamwe neSketch, maforodha, uye nezvimwe
Dropbox Pepa rinosimudzira rako rekushandira nharaunda pamwe nekuunzwa kwezvinhu zvitsva senge maFolder, Archive, Sketch kusangana uye nezvimwe.
Iwe unoda kugadzira graffiti? Aya ndiwo maapplication akanakisa uye mawebhusaiti ekugadzira YEMAHARA zita graffiti Iwe unoziva Graffiti Musiki? Tsvaga!
Google Chrome ichatibvumidza kubvisa ruzha kubva pamapeji ewebhu zvachose
Rimwe remabasa akakosha anowanikwa neshanduro dzinotevera dzeChannel rinowanikwa mune sarudzo yekubvisa ruzha rwewebhu
Iwe unogona ikozvino kushandisa Samsung browser pane "ese" mafoni eApple
Samsung inozivisa kuti yayo internet browser Samsung Internet Browser ikozvino inogona kushandiswa pane chero Android smartphone
NASA kuvimba neIntel yekuchenjera masisitimu ekuongorora nzvimbo
NASA ichangobva kuzivisa chibvumirano chekubatana pamwe neIntel kushandisa masisitimu ehungwaru ekuongorora data remumiriri.
Iye zvino unogona kutora panoramic uye 360º mafoto pasina kusiya Facebook
Iyo itsva yekuvandudza kuFacebook inobvumira vashandisi kutora uye kugovana panoramic uye 360º mafoto vasina kusiya iyo nhare yekushandisa
Android Oreo: zita rayo rinosimbiswa uye idzi ndidzo nhau dzadzo huru
Google yakaratidza zviri pamutemo vhezheni yayo nyowani sisitimu yekushandisa yemahara uye mapiritsi: Android Oreo kana Android 8.0
Android O ichaunzwa zviri pamutemo muna Nyamavhuvhu 21
Android O ichaziviswa zviri pamutemo musi waAugust 21. Ndokunge, ichagovana kujeka pamwe neinotevera yakazara kuora kwezuva
Gadzirira Windows 10
Aya manomano achatibatsira kukwidzirisa Windows 10 uye kuita kuti komputa yedu ishande zvirinani, nekukurumidza uye pasina kutipa matambudziko mazhinji.
Kusvika pamakumi mana ezviuru zveApple maapplication anogona kunge ari kukusora
Dzimwe nyanzvi dzekuchengetedza dzakaona kuti pane zvinopfuura zviuru zvina zvemaapplication eApple izvo zvinogona kunge zviri kuongorora pane zvaunoita nefoni yako
Maitiro ekuisa mutauro pack paWindows
Ndekupi kwaunotora mutauro weSpanish muWindows 7 kana Windows 10? Tsvaga hunyengeri hwekuisa kana kusunungura runyorwa rwemutauro muWindows
Windows 10 muoni wemifananidzo
Windows 10 muoni wemifananidzo kazhinji unonetesa uye unononoka. Ndosaka tichikudzidzisa maitiro ekudzokera kuWindows Image Viewer mukati Windows 10.
Tinokuratidza mashandisiro aungaita VidtoMP3 uye nedzimwe sarudzo kuti utore mimhanzi yemahara, mavhidhiyo nenziyo kubva kuYouTube mune MP3 fomati.
Chenesa uye mhanyisa kushanda kwePC yako neNero TuneItUp
Nekuda kweiyo Nero TuneItPro software, tinogona kunatsiridza mashandiro ePc yedu mumasekondi mashoma.
WhatsApp ichavandudza manotsi ezwi uye iwe uchave uine yakawanda yekurekodha nguva
WhatsApp inogadziridza zvakajairika. Uye yekupedzisira ine chekuita nechimwe cheanonyanya kufarirwa mabasa ebasa: iwo odhiyo meseji
Ndeipi mamiriro ezvinyorwa? Kana iwe uchiziva mabatiro emamiriro ezvinhu muWindows, iwe unozochengetedza yakawanda nguva uchishanda nekombuta yako. Tinokuratidza maitiro ekuishandisa.
Kutenda kusevhisi nyowani yeMozilla, tinokwanisa kutumira mafaera anosvika 1 GB zvakachengeteka
Kutenda Kutumira, tinokwanisa kutumira mafaera anosvika 1 GB muhukuru zvakakwana zvakachengeteka uye nekupera
OffLiberty, tora mavhidhiyo marefu kubva kuYouTube
OffLiberty ndeye yemahara yewebhu kunyorera iyo inotibvumidza kurodha mavhidhiyo nemimhanzi kubva kuYouTube kuenda kuPc yedu, nhare kana piritsi muMP4 uye MP3 fomati.
Ndinoziva sei kuti ndeipi hard drive yandinayo?
Tsvaga maitiro ekuziva kuti ndeipi hard drive yandinayo pakombuta yangu neyakareruka hunyengeri kana akati wandei emahara maturusi. Ndeupi modhi yeHDD kana SSD yauinayo? Tsvaga!
Kana iwe uchida kuvharidzira YouTube chiteshi, nehunyengeri hushoma tichava nemukana wekuvhara mavhidhiyo eiyo YouTube chiteshi iwe yausingade.
Pasita zai rakavanzwa mubeta ina yeApple 8.0 yakagadzika maalarm: ko Octopus ndiro zita rinopihwa iyi vhezheni itsva?
WhatsApp ine chinyorwa chitsva: 1.000 bhiriyoni ezuva nezuva vashandisi
WhatsApp ndiyo inonyanya kufarirwa mameseji application pasi rose. Uye iwo manhamba avakapa kubva kune yavo yepamutemo blog vanoisimbisa.
Mashandisiro ekushandisa iyo Alarm uye Wake-up mukati Windows 10
Windows 10 ine alarm, alarm wachi uye timer ine dhizaini inoitirwa kutsiva iya yemafoni nhare. Tinokuratidza mashandisiro awo
Google inoda kugadzirisa ese matambudziko eiyo nyukiliya fusion
Google ichangobva kuzivisa mubatanidzwa wayo nekambani yeTri Alpha Energy kugadzira hurongwa hunokwanisa kugadzirisa matambudziko ekusanganiswa kwenyukireya
Kaspersky anotangisa yemahara antivirus yeWindows
Kaspersky Lab inotangisa yemahara antivirus yeWindows inonzi Kaspersky Lab, chii chaizvo chinoita uye nei ichiitangisa izvozvi?
Gmail Smart Mhinduro dzave kuwanikwa muSpanish
Gmail Smart Mhinduro haichisiri kungowanikwa muChirungu, asi timu yekusimudzira yawedzera mutauro mutsva: Spanish.
Iyi ndiyo nzira yakachipa kwazvo yekutarisa imba yako neako smartphone
Kupinda uko kwatichataura nezve iri nyore kwazvo kushandisa system yekugadzirisa kuongorora imba yako panguva yezororo rezhizha.
Aya ndiwo mabasa uye mashandiro ayo anozonyangarika mune inotevera yekuvandudza Windows 10
Microsoft ichangobva kuzivisa kuburikidza neayo blog inova ichave mabasa uye zvinoshandiswa izvo zvichange zvisisipo mune inotevera vhezheni yeWindows
Deseat.me, suka email yako yeavo vanonyorera anofara
Iwe uri mumwe weavo vanonyorera kuwanda wemasevhisi wobva wawana yako inbox izere neSpam? MuDeseat.me iwe une mhinduro
Atomian, ndiro zita reBig Brother rinoshandiswa neFC Barcelona
FC Barcelona inoda maneja mukuru we data rese rairi kugadzira. Atomian ari pamusoro pekuve wake chaiye Big Mukoma
CCleaner inoshandura muridzi uye inova chikamu cheAvast
Mumakore achangopfuura takaona maitiro matsva emakambani esoftware akawana mukana wakakosha mu ...
Maitiro ekuona mapassword akavanzika kuseri kwemaasterisks
Nemadiki madiki isu tichava nemukana wekuona mapassword akavanzwa kuseri kwemaasterisks. Kana iwe usiri kurangarira kupasa, ndiwo maitiro aunogona kuzviona.
Amazon inoshanda pane yayo yega mameseji app
Amazon ingadai ichishanda pane yayo yega mameseji app inonzi chero nguva iyo yaizounza matsva mabasa uye kusangana pamwe nezvimwe zvigadzirwa zvayo
Pamhepo mazwi ma processor
Iwe unoda here kushandisa Izwi pamhepo uye mahara? Usapotsa kusarudzwa kweakanakisa emahara epamhepo epamhepo processor ekugadzirisa zvinyorwa.
Google inotangisa chishandiso chekuita makopi edhiraivho yedu muDhiraivha
Google ichangobva kuvhura chishandiso chitsva chekuchengeta chero faira ripi pakombuta yedu muGoogle Drive.
Google inotiratidza iwo hunhu hunoratidzwa nehungwaru hwayo hwekugadzira mukutora mifananidzo
Kupinda kwatichataura nezve iro rakakura basa rekupedzisira rakaitwa neGoogle, huchenjeri hwekugadzira hunogona kugadzirisa mapikicha nehunyanzvi hwemhando.
Yemahara vhidhiyo mupepeti
Usapotsa pane akanakisa emahara evhidhiyo edhita iwe aunogona kurodha pasi yeWindows, Mac kana Linux. Kana iwe uchida vhidhiyo mupepeti, iwe uchaiwana pano.
Kuonekana neWindows Phone 8.1
Microsoft inomira kupa rutsigiro rweWindows Foni 8.1, saka vashandisi havachagashiri zvigadziriso zvemhando ipi neipi
Ubuntu rave kuwanikwa kurodha muWindows Store
Ubuntu rave kuwanikwa mahara kurodha pasi kubva paWindows Store uye mune ino chinyorwa isu tichakuudza maitiro ekuiisa.
Snapchat inoenderera ichiita mutsauko
Snapchat inotangisa nyowani nyowani izere nenhau: share zvekunze zvinongedzo, chinja izwi rako uye chinja kumashure
Instagram ikozvino inobvumidza ichivharira makomendi uye spam
Instagram ichangobva kuburitsa nyowani nyowani apo vashandisi vanozokwanisa kuvharira inosemesa meseji uye kunyangwe spam.
Maitiro ekudzima otomatiki mitsva mu windows 10
Heano maitiro ekudzima otomatiki meseji muWindows 10. Dzivirira PC yako kubva otomatiki kumutsiridza nenzira isingatarisirike nematanho aya
Maitiro ekudzoreredza yako ese akarasika data pa iPhone ne iPad
MobiSaver inyanzvi software iyo inobvumidza iwe kuti utore yakarasika kana kudzimwa data uye mafaera kubva kune yako iPhone kana iPad, kana ako backups mu iCloud kana iTunes
DMZ, ruzivo rwese rwaunoda kuti ugadzire nzvimbo yako yakasarudzika
Tsvaga kuti chii chinonzi DMZ inomiririra, inogadzirirwa sei uye kuti sarudzo yeDMZ iripo mumaraira ese ari pamusika ndeapi. Zvinovandudza here kubatana mumitambo yemavhidhiyo?
Facebook ichavhura chirongwa chitsva kugadzira vhidhiyo zvemukati
Vakomana paMark Zuckerberg vazivisa kuvhurwa kwevhidhiyo mupepeti wevanogadzira zvemukati mukupera kwegore.
Iyo yakaburitswa Windows 10 kodhi kodhi ndeyechokwadi sekusimbiswa neMicrosoft
Microsoft yanga isina imwe sarudzo asi yekusimbisa chakavanzika chakavanzika, kodhi yakaburitswa yekodhi ye Windows 10 ndeyechokwadi.
Iwo akanakisa bots eTeregiramu
Tsvaga akanakisa bots eTeregiramu. Isu tinotsanangura kuti chii chinonzi bot, ndechei uye kuti yakagadzirirwa sei kuti uwane zvakazara muTeregiramu.
Spotify inotangisa runyorwa rweboka mune yayo yekuwedzera yeMessenger
Nebasa idzva reSpotify, unogona kugadzira boka kana mazita ekudyidzana ayo shamwari dzako dzepaFacebook dzinogona kutora chikamu.
Maitiro ekugonesa multithreaded ficha muFirefox 54
Basa rakaverengeka harina kuvhurwa natively kana tangogadziridza kuFirefox 54. Tinokuratidza maitirwo azvo.
Matambudziko kana iwe uchitamba online? Pamwe kutarisa iyo PING yekubatana kwako kuchakubatsira
Kupinda kwatichataura nezvenzira dzakasiyana dzekuvandudza ping yekomputa yedu kuti umire kutambura nekunonoka kana uchitamba online.
Facebook inoshamiswa nemhedzisiro isingatarisirwe inopihwa neyakagadzirwa njere
Kune zvakawanda zviwanikwa kana nguva, nezvose izvi zvinosanganisira, kunyanya maererano nemutengo, ...
Iwo akanakisa ekuwedzeredza uye ekuwedzera-ons eFirefox
Tsvaga akanakisa ekuwedzera uye ekuwedzera-eFirefox, imwe yeakanakisa mabhurawuza pamusika iwe aunogona kusimudzira nemamwe akawanda maAdvons.
Iwo akanakisa ekuwedzera e Chrome
MuChitoro cheChrome tinogona kuwana huwandu hwakawanda hwekuwedzeredza kugadzirisa kushandiswa kweChannel. Tinokuratidza zvakanakisa zviripo.
Maitiro ekudzora ruzha uye kugadzirisa kugadzirisa kwemifananidzo neinternet chishandiso
Tsvaga nzira yakapusa yekuvandudza kugadzirisa kwemifananidzo uye kudzikisira ruzha pamhepo pasina chidimbu chemapurogiramu akaomarara senge Photoshop.
Moodnotes, iyo hutano hwepfungwa app kubva kune vakagadzira veMonument Valley
Moodnotes chirongwa chinogadzirwa nemusoro weMonument Valley uye ma psychotherapists maviri anotibatsira kusimudzira hutano hwepfungwa
Dzese nhau muIOS 11, tvOS 11, watchOS 4 uye macOS Yakakwira Sierra
Isu tinokuratidza iwe dzese nhau kuti maApple anoshanda masisitimu ayo anosvika mune yavo yekupedzisira vhezheni kubva munaGunyana
Ne iOS 11, iyo iPad inotora hofori kusvetukira mukugadzirwa
Iyo iPad ichangobva kuona kusvetuka kwayo kukuru mukugadzirwa nekutenda kune iOS 11 uye nenhau dzayo huru: Mafaira, App Switcher, Dhonza uye Kudonha uye nezvimwe
Microsoft Inozivisa iTunes Kuuya kuWindows Chitoro Kwakakurumidza
Microsoft yakazivisa paKuvaka 2017 kuti iTunes ichave ichiwanikwa munguva pfupi irodha pasi kubva kuWindows 10 Chitoro cheWindows.
Satya Nadella anosimbisa izvozvo Windows 10 yakaiswa pamamirioni mazana mashanu emidziyo
Windows 10 yatovepo mumadhizaini emamirioni mazana mashanu kana chii chakafanana neMicrosoft iri kure kwazvo nekuzadzisa chinangwa chayo chekutanga.
7 mafomu aunogara uchiziva pawakamira
Kana iwe uchiramba uchikanganwa kuziva kwawakamira, isu tinokuratidza iwe manomwe mafomu ekugadzirisa iri dambudziko
Youtube yatove nemamiriro erima uye dzimwe sarudzo dzekugadzirisa dziripo
Iyo nyowani YouTube dhizaini inogona kutoshandiswa kwemavhiki mashoma uye iwe unogona kuzviita zvakananga kubva pawebhu ...
Maitiro ekuvhura iyo faira rePDF
Kuvhura faira muPDF fomati maitiro akareruka uye zvinongotora maminetsi mashoma kutevera rimwe rematanho atinofunga.
Maitiro ekudzima Cortana mumatanho matatu
Bvisa Cortana, mubatsiri weMicrosoft, mumatanho matatu ari nyore izvozvi uye nenzira yakapusa.
Iwo akanakisa mabhurawuza eWindows
Tinokuratidza rondedzero yeakanakisa mabhurawuza eWindows, ayo atinogona kukasira kurodha pasi, kuisa nekunakidzwa paWindows PC yako
WhatsApp inovandudzwa pane iOS ichibvumira Siri kuverenga mameseji
Vashandisi veIOS vane mhanza kana vakashandisa Siri uye nequintessential mameseji app, WhatsApp. Ino nguva ...
7 manomano ekutora mukana zvakavanzika zveNetflix kodhi nemamenyu
Kupinda kwatichataura nezve akati wandei eanonakidza 'mateki' iwe aunogona kuve semunhu akanyoreswa mushandisi weNetflix chikuva.
Iwo akanakisa mabhurawuza eMac
Aya ndiwo mabhurawuza akanakisa eMac aunogona kurodha pasi, kuisa uye kunakirwa izvozvi pakombuta yako yeApple.
Chrome inogona kusanganisa yevharo blocker mune ayo ese mavhezheni
Zvinoenderana nezvinyorwa zvine chekuita neChannel, Google inogona kusanganisa yevharo blocker mune inotevera vhezheni yeChannel
Snapchat inotsunga neakawedzera echokwadi mafirita
Snapchat inozivisa nhau papuratifomu yayo, kusanganisira kusvika kwemafirita matsva epamberi zvichibva pachokwadi chakawedzerwa.
Iyo yekumirira inosvika kumagumo, Amazon Pay pakupedzisira inosvika kuSpain
Mushure mekumirira kwenguva refu isu tinogona pakupedzisira kuzivisa kuti Amazon Pay inozowanikwa muSpain.
Iyo itsva vhezheni yeGoogle Earth yave kuwanikwa
Chokwadi kupfuura mumwe wevaya varipo pano anoshandisa kana akamboshandisa Google Earth, nekuti ichi chishandiso chikuru ...
Maitiro ekumisikidza Windows 10
Tinokuratidza zvese zvaunoda kuti uzive kuti ugone kumisa nemazvo Windows 10
Maitiro ekutsikisa rakaomarara dhiraidhi nyore uye nekukurumidza
Iwe unofanirwa kuomesa hard drive yekomputa yako, usazvidya moyo, nhasi tichatsanangura maitiro ekuzviita nekukurumidza uye nyore.
Google Calendar uye Outlook Bata Sync inoenderera ichiedzwa pane macOS
Google Calendar uye Outlook Bata Sync vanogamuchira akateedzana ekuvandudza kubva kuMicrosoft kune vashandisi ve ...
Microsoft haichapi rutsigiro rwepamutemo rweWindows Vista
Zvakanaka, kunyange hazvo nhau dzaive dzichizivisa kwenguva yakareba kuti Microsoft yaizorega kutsigira iyo inoshanda sisitimu ...
Maitiro ekushandura pikicha kuita kudhirowa
Kuchinja mapikicha edu kuve madhirowa maitiro akareruka nekutenda kune hombe nhamba yezvishandiso zviripo kune yega yega sisitimu yekushandisa.
Maitiro ekusunungura kurodha pasi Windows 10, 8.1 uye 7 muIO fomati
Nhasi tinokuratidza maitiro ekurodha pasi Windows 10, 8.1 uye 7 yemahara muIO fomati, kuti ubudise mumatambudziko mazhinji uye ikuchengetedze mari yakanaka.
Maitiro ekuchengetedza nzvimbo yekupaka kwako muGoogle Mepu
Kupinda kwatinozofumura mhinduro inogoneka nyore kuti tikwanise kuchengetedza nzvimbo dzemotokari dzedu muGoogle Mepu.
Iyo itsva vhezheni ye Twitter inosvika, Twitter Lite iyo inotibvumidza isu kuchengetedza data
Kana paine pasocial network yandinofarira ini, ndeye Twitter. Ichokwadi kuti ine zvimwe zvinhu zvingave ...
Maitiro ekubvisa kushambadza kubva Windows 10
Kutenda kune iyi diki faira inoshandura iro registry, tinogona kudzima zvese kushambadza izvo Windows 10 inotiratidza
Apple Music yeApple yakagadziridzwa ine interface yakafanana neiyo yeIOS
Kana iOS 10 mushandisi yakamanikidzwa kushandisa Android terminal, uye ichida ...
Google inotangisa Android 7.1.2 yeNexus neGoogle Pixel
Iyo nyowani vhezheni yeApple 7.1.2 iri kutotanga kusvika kuGoogle Nexus uye Google Pixel zvishandiso. This…
Zvinoita here kutumira zvinonhuwira online? Vatsvakurudzi vari kutoshanda pairi
Boka revatsvakurudzi vanobva kuYunivhesiti yeSingapore vanokwanisa kuronga nzira yekutumira zvinonhuwira pamusoro peinternet.
Teregiramu inovandudzwa kuwedzera mafoni
Teregiramu hapana mubvunzo iko kunyorera mameseji iko kuri neimwe nzira kutarisana neakakurumbira WhatsApp. This…
NASA inotishamisa neraibhurari izere nemhere, mapikicha uye mavhidhiyo kubva muchadenga
NASA inotishamisa nekusunungurwa kweinjini yekutsvaga yakatsaurirwa kupa mifananidzo, mavhidhiyo uye odhiyo kubva muchadenga.
WhatsApp inoderedza nguva yekudzima mameseji kumaminetsi maviri
Kugona kudzima mameseji paWhatsApp hapana mubvunzo kuti ndeimwe yenhau dzinotarisirwa kwazvo nevamwe vashandisi ...
Microsoft inotarisana nematare matsva ekuvandudza makomputa pasina mvumo
Vakomana vanobva kuRedmond vanosangana nechitsva chitsva kubva kuvashandisi chekusimudzira otomatiki Windows 10
Microsoft inobvisa Docs.com mushure mekukanganisa kukuru
Muvhiki rino rakafanana Microsoft yakafunga kubvisa Docs.com mushure mekuratidza kuti injini yekutsvaga yakaburitsa mamirioni e data rakavanzika.
Spotify inozivisa kutengwa kweMightyTV
Spotify achangobva kuita misoro yenyaya mushure mekuzivisa kutengwa kweMightyTV, audiovisual content recommendation platform.
10 akakosha matipi ekugadzira webhusaiti neWordPress
Iwo gumi akakosha matipi kana uchigadzira webhusaiti neWordpress. Kana iwe uchizoshandisa Wordpress, haufanire kukanganwa kuteedzera aya matipi rimwe nerimwe.
WhatsApp inozivisa vashamwarikadzi vako otomatiki kuti iwe wachinja yako nhamba yefoni
WhatsApp yakagadzira chimiro chinozivikanwa nevatinoshamwaridzana navo nezvekuchinja kwenhamba yefoni.
Instagram inogadziridza pane chengetedzo
Instagram ichagadziriswa nematanho maviri matsva ekuchengetedza, imwe yeakaunzi chitupa uye imwe yezvinhu zvakashata.
Emojis nyowani inogona kuonekwa pawebsite yeEmojipedia
Uye ndeyekuti emoji chikamu chehurukuro dzedu kuburikidza nekutumira mameseji uye izvi zviri kuwedzera nekugadzirisa izvi ...
Apple inozivisa kutengwa kweKufamba kweBasa
Ivo vaviri avo vane basa rekusimudzira kweiyo Workflow application uye Apple pachayo yakasimbisa kuwanikwa kwayo neApple.
Mavhidhiyo, mukwikwidzi waApple wemaapps akaita se Instagram uye Snapchat
Apple inopa maVideo, network nyowani inokwikwidza, kutanga mwedzi unouya, nevamwe vakaita sa Instagram kana Snapchat.
WhatsApp uye zvinyorwa zvayo zvemavara izvozvi zvave kuwanikwa paApple zvakare
Vhiki rapfuura kuvhurwa zvakare kweiyo mamiriro eiyo WhatsApp application mune zvinyorwa fomati, uye ...
Chrome inovandudza zvakanyanya kugadzirisa kwemifananidzo ye3D
Mukuvandudzwa kwazvino kweGoogle Chrome, kutsigirwa kweiyo WebGL 2.0 standard yakaverengerwa kuitira kugadzirisa kurapwa kwemifananidzo ye3D.
JPEG mafaera ikozvino ave 35% akareruka nekuda kweiyo Google software
Boka revatsvagiri kubva kuGoogle rakagadzira algorithm nyowani inokwanisa kudzikisa saizi yemifananidzo yeJPEG apo ichiwedzera iwo mhando.
Gmail ikozvino inokutendera iwe kuti utambe mavhidhiyo pasina kuodhaunira
Google yangozivisa chiziviso chitsva cheGmail umo maunokwanisa ikozvino kuona mavhidhiyo musina kudhawunirodha.
Iwe unogona ikozvino kushandisa Alexa semubatsiri chaiwo pane yako iPhone
Mukuvandudzwa kwazvino kwekushandisa kweAmazon kwemidziyo yeIOS, mukana wekushandisa Alexa semubatsiri chaiwo waiswa.
WhatsApp inodzokera kumashure uye inobvumidza vashandisi kuisa zvinyorwa zvemashoko
WhatsApp inodzosera kumashure uye inosarudza kubvumidza vese vashandisi veiyo pakarepo mameseji chikuva kuti vakwanise kunyora zvinyorwa zvemashoko.
Gmail inotobvumidza iwe kutumira mari kuburikidza neplatform yayo
Chekupedzisira, Google ichangobva kuzivisa zviri pamutemo kuti Wallet zviri pamutemo inouya kuApple natively, zvinozorerutsa mashandisiro ayo.
Skype ye macOS ikozvino inoenderana neTouch Bar yeMacBook Pro nyowani
Yazvino yekuvandudza yeMicrosoft Skype application, yekufona uye vhidhiyo mafoni, inoita kuti ienderane neTouch Bar
Idzi ndidzo nhau mukugadziriswazve kweGoogle Hangouts
Google haisati yaziva zvechokwadi zvekuita neGoogle Hangouts, mukushanduka uku zvinoita sekunge vari kuda kuitarisa pakushandisa kwayo padanho rebhizinesi.
DeepCoder ikozvino yave kugona kugadzira ayo mapurogiramu uye kunyorera
Mazuva ese mhinduro nyowani uye dzinoshamisa dzinounzwa idzo ivo vavaki vadzo vanoda kuita hupenyu hwedu zvishoma ...
Chrome vhezheni 57 yave kuwanikwa kurodha pasi
Google ichangobva kuburitsa itsva Chrome yekuvandudza, nhamba 57, vhezheni inoremadza kupinda kune plugins.
Google inokwanisa kuvandudza muturikiri wayo nekuda kwekushandisa kwehungwaru hwekunyepedzera
Google inozivisa kuti mainjiniya ayo akawedzera mitauro mitsva mitatu kune yayo AI yekushandura mutauro chikuva.
Maitiro ekuwedzera ako ako mitambo kuNES Classic Mini
Iye zvino takazviedza uye isu takazviwana zviri nyore chaizvo uye zvakakurudzirwa kupa iyi console yechipiri hupenyu.
Idzi ndidzo nhau dzekuti WhatsApp ichaburitsa mune yayo inotevera yekuvandudza
WhatsApp yatove neyakagadziridzwa nyowani yakagadzirirwa iyo inozivikanwa app ine akati wandei mashandiro ayo ayo, kana rimwe chete, rausingade.
Amazon ichaburitsa chero ruzivo rwainarwo kana ichizobatsira kugadzirisa mhosva
Mushure mekukumbira kwemushandisi muridzi weAmazon Echo, kambani inofanirwa kusiya rese data rakanyorwa nemubatsiri chaiye.
Munguva pfupi inotevera tichakwanisa kudzima meseji dzakatumirwa neWhatsApp
Mushure mekutambira nhau dzeWhatsApp chinzvimbo mavhiki mashoma apfuura, ikozvino tave padyo kupfuura ...
Kutenda kuGoogle Mapikicha izvozvi zvave nyore kugadzirisa ganda remifananidzo yako
Mifananidzo yeGoogle ichangobva kuchinjwa kuwedzera mamwe mashandiro anokwanisa kuita kuti ako mapikicha aoneke nechiedza chakaringana uye magadzirirwo.
Google Mubatsiri akazivisa zvese zvishandiso zveApple
Iyi ndiyo vhidhiyo iyo kambani ichangoburitsa mubatsiri wayo wega wezvinhu zvese izvo ...
Kukanganisa kukuru kwekuchengetedza kwakawanikwa muSlack
Nyanzvi yezvekuchengetedza inopihwa $ 3.000 yekutsvaga yakakosha yekuchengetedzeka mune yakakurumbira Slack chikuva.
CloudFlare yakaburitsa yakavanzika data kubva ku1Password, Fitbit uye Uber kwemwedzi
CloudFlare inobvuma kuti kwemwedzi yakati wandei yave iine ruzivo rwebhizinesi uye mushandisi data rakafumurwa pese pa internet.